18 May waa Maalintii Guusha iyo Midnimo Axmed Carwo
18 May waa Maalintii Guusha iyo Midnimo Axmed Carwo 0 Thursday 18th May, 2017 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Dhexe Visits: 108
18 May waa Maalintii Guusha iyo Midnimo
Axmed Carwo Waa lix iyo labaatan jir. Waa mahad Alle oo dalkeena Somaliland waxuu ku sugan yahay nabad, ammaan, iyo dimuquraadiyad. Hawl adduun dhammeys ma leh, waxa ina soo maray welina raadkeedu taagan yahay abaar culus oo xoolihii dhammeysay, dadkiina ka dhigtay faqri iyo bukaan socod iyo in dhimmatayba. Meynaan helin caawimadii caalamka kolkaad ka reebto qadhiidh af ka sheeg ah. Alle mahadii raxmaadkii wuu inoo bilaabmay, waxa se loo baahan yahay dib u kicin dadkii abaartu xoolo tirtay.
Waa arrintaas tan taabatay damaashaadkii aynu sameyn jirnay. Si kharaskha loogu bedelo mucaawino dadka abaarahu halakeeyey. Waxa xukuumad iyo shacbiba aynu isla garanay in loo rogo ololo lagu uruuriyo mucaawinada dan yarta xoolahu ka baxayn si loogu sameeyo xoolo siin (restocking) iyo barnaamajyo lagaga hor tago abaaraha sida dhir abuurka, ceelal qod iyo biyo joojin. Waxa kale oo weli inaga dhiman waa aqoonsi caalami ah, waa mid aynu ku gaadhi doono samir, wadajir iyo dedaal, iyo mahadda Alle.
Qaranimada Soomaliland waxa loo huray dhiig, maal iyo nool. Waxa lagu helay kifaax hubaysan oo ururkii SNM ku guulaysatay. Waxaana lagu fooladeeyey Burco 18kii May 1991, kolkii qalin iyo qalbiba ay ku midoobeen beelahii SNM iyo beelihii ka baxsanaa ururka, ka dib markii dood dheer oo cad, si siman loo gorfeeyey.Waxa leysku raacay in lala soo noqdo qaranimadii luntay 1960, waxaana la dhisay dawlad ay hogaaminayso SNM muddo laba sano ah. Shirka Burco beelaha Soomaliland wey u dhammaayeen min Ceelaayo ilaa Lawyacaddo. Beelahii SNM iyo Beelahii kale si siman oo wadajir ah ayey ku go'aansadeen soo celinta Qarannimada Somaliland.
Waxaana Madaxweynahii u horeeyey noqday Cabdirahmaan Axmed Cali Allah ha u naxariistee. Waxaa la dhisay Guurti lagu soo daray beelihii darafyada iyo xukuumad loo dhan yahay oo beelahu kulmisay.
SNM waxy noqtay jabhadii u horreysay dunida ee hab dimuquraadi ah ku dhisan, iyadoo horeba tijaabada dimuquraadiga ku guulaysatay oo shan hoggaamiye kala bedeshay mudadii tobanka sano ee halganku socday. SNM oo raacaysa habdhaqankaas waxay dhistay dawlad ka koban 17 wasiir oon lahayn ku-xigeeno iyo wasiir dawlayaal. Waxayna noqotay mid si taam ah u fulisa mudadii ay qabsatay. Inkastoo qas siyaasi ihi dhaliyey isku dhac, haddana waxay noqtay mid talada u celisa dadweynaha oo ay hagayaan guurtida beelaha Soomaliland oo dhan. Waxaana dhacday in Boorame oo ah magaalo madax beel aan SNM ahayni noqotay halka lagu amboqaado horusocodka Soomaliland. Waxa xilkii ku wareegay Madaxweyne aan ka tirsanayn halkankii SNM, Alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Waxaa xigay Madxweyne Daahir Riyaale oo ka tirsan beelahii ka maqnaa ururkii SNM oo nasiib u yeeshay inuu noqdo Madaxweynahi u horeeyey ee si toos ah loo doortay. Waxayna dhammeysay seddex marxaladood oo dalku soo maray muujisayna in talada dalka loo siman yahay.
Waxa xigtay doorashadii labaad ee Madaxtooyada 2010, waxayna guul weyni ku raacday xisbiga KULMIYE, waxaana Madaxweyne noqday Axmed Maxamed kuxigeena Cabdiraxmaan Saylici oo ah hoggaanka maanta. Guushaasi waxay kor u qaaday dimuquraadiyadda Soomaliland oo noqotay kolkii ugu horreysay taariikhda Soomaaliyeed guud ahaan ee mucaarid doorasho ku guuleysto, isla markaasna geeska Africa kow ka ahyd, dunida seddexadna guud ahaan ku ah naadir iyo teel teel.
Illaahay mahadi ha ka gaadhee, dalku waa nabad, dadkuna waa dar niyad wacan oo ididiilo wanaagsan hiigsanaaya. Waxa jirta colaad inagu xeeran, waxa jirta qabyaalad curyaamisay qaranka, waxa jirta dhutis dhaqaale iyo sicir barar ka dhashay dakhligii xoolaha oo yaraaday iyo arrimo kale. Waxa barbar socday barnaamajyo horumar ee Xukuumadda Kulmiye qabatay. Maanta taas naaqishimayno oo xusku waa guulaha iyo wanaaga aynu wada leenahay Mucaarid iyo Muxaafidba. Waa Xuska 18ka May, iyo maalintii midnimada.
Dawladnimadu waa guri oo kale oo haddii meel dilaacdo oon dilaacaas la gufeen ay galaafan doonto guriga oo dhan. Waxa dalku qaatay nidaam dimuquraadi ah oo ku salaysan axsaabta badan. Taasi waxay waajib ka dhigaysaa tartan xisbiyada dhex mara Tartanaku waxa ka dhasha mucaarid iyo muxaafid. Mid waliba xil gooni ah oo u gaar ah ayaa saran.
Muxaafid waa kan haya awoodii dawladnimo, waxa shacbi weyne kula xisaaabtamayaa wax qabadkooda. Waa se in looga dambeeya maamulka, oo waxa sharcigu u baneeyey lagu jiq siinin. Waxa laga rabaa ma aha wax ayna awood dhaqaale amba farsamo u lahayn, waa mid lagu qiyaasaayo dhaqaalha yare e dalku leeyahay, iyo aqoonta aan fidsanayn ee jirta. Togba waa ku taagtii, dawsladna waa ku tamarteed.
Mucaaridda u daa dhaliil iyo dhaleecayn. Taas waxaa raacda inay dhaliisha raaciyaan waxa ay la iman karaan si ay ku toosiyaan. Waxay la imanayaan barnaamaj siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho oo ay dadweynaha soo hor dhigaan. Ma aha inay waqtigooda ku dhammeeyaan casho sharaf qurbaha ah iyo xafladdu gudaha ah iyo makarafoon aan weedha ka baxaysa loo fiirsan.
Kaalinta dadweyne waa inay la socdaan labada garab, oo ay danta guud ku cabiraan si ay u kala doortaan. Dadweynaha intiisa badani waa inay noqdaan dar u dhego fudud qiimeynta arrimaha socda, ayna u kala raacaan marba meesha danta guud ku jirto. Guntuna waa garabka ay u bataan kan shukaanta ay u dhiibayaan. Dadku ha ka koro dan gaaban, dhuuni maalmeed iyo nin neceyb iyo reer jaceyl.
Tartanku ma aha mid ina ilowsiiya qaranimadeena, midnimada dal iyo danaha badan ee aynu ka simannay. Waa geed ka go'an inaynu qaranimada wado daafacno. Waa inaynu wadajir ugu halganaa ictiraafka. Waa inagoo kala xisbi ah wado shaqaynaa, sharkado wada dhisanaa, ururo bulsho wada maamulnaa. Ogow wax qabadka xukuumaddu dadka waa u siman yahay. Jidka la dhiso, dugsiga la bineeyo, ceelka la qodo, shaqaalaha mushaharka loo kordhiyo, cisbitaalka la dhiso, garoomada ciyaaraha, iyo madaarada midna reer ma leh. Waa mid loo siman yahay.
Waxaan bogaadin u dirayaa dadweynah Soomaaliland meel ay joogaanba, dawlad iyo mucaarad, yar iyo weynba, gudo iyo debedba. Waxaan leeyahay meel fiican ayeynu maraynaa, inta dhimman waa is faham iyo isla jaan qaad iyo dulqaad leysu yeesho, cadowga oo leyska jiro iyo danta guud oo loo wado guntado, iyo Illaahay oo la mahadiyo iyo nabadda aynu ku suganay oonu wado ilaalino.
Farxadda damaashaadka ku bedel mucaawinada walaalahaga ay ku habsatay abaartu, farxaddeenu waa tan qalbiga iyo niyadda oo ah mid dhammaan aynu ka simannay. DHAMMAAN KU CIIDA NABAD, CAAFIMAAD, WANAAG IYO FARXAD.
SOOMALILAND HA NOOLAATO
Send to your friend Related Guusha Muuse Biixi Oo Dalka Ka Bad Baadinaysa Khatar Uu Iminka Ku Sugan Yahay + Shacabkii Oo Dabin Siyaasadeed Loo Dhiga June 25, 2017
Qiso Ku Saabsan Xaqa Waalidka W/Q Mustafe Axmed Maxmed Geedi June 24, 2017
SOMALILAND SHAQSI LA HESHII WAY TAQAN LKN BULSHO LA HESHII MA TAQAAN,QANIIN MARKASTA BUHOODLE KA DILAACA W/Q Mustafe Axm June 23, 2017
Ambassador Cabdale Maxamuud Qardhab Oo Baaq U Diray Xubnaha Golaha Dhexe Ee KULMIYE Kaga Jira Beesha Degmada Axmed Dhaga June 23, 2017
Maansadii Ramadaan dhamaataye:Waxaa tiriyey Abwaan Axmed Cali Aadan. June 22, 2017
Khayraadka Dabiiciga iyo Ganacsiga .. W/Q Axmednasir Daahir Xuseen June 18, 2017
Mar hadii gudidii culimada ee dastuuriga ahaa la magacaabay waa in wasaaradii diinta la baabiiyaa oo shaqadeedii iyo xaf June 17, 2017
Shirka La Magac Baxay Midnimo Kow HY/ HJ June 17, 2017